အရည်အသွေးမြင့် KN95 အသက်ရှူစက်စက်ရုံနှင့်ထုတ်လုပ်သူများ Sanxin
ဤထုတ်ကုန်ကိုထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်နေစဉ်အတွင်းကျန်းမာရေး ၀ န်ထမ်းများအသုံးပြုရန်ရည်ရွယ်သည်
၎င်းတွင်နှာခေါင်းကလစ်၊ မျက်နှာဖုံးနှင့်မျက်နှာဖုံးတပ်ဆင်ထားသည်။ ၀ တ်ဆင်သူ၏လ၊ နှာခေါင်းနှင့်မေးစေ့ကိုတိုက်ရိုက်ကာကွယ်ရန်မျက်နှာဖုံးတွင် ၀ င်မှုအလွှာ၊ အလွှာအလွှာနှင့်ပြင်ပအလွှာတို့ပါ ၀ င်သည်။ အတွင်းနှင့်ပြင်ပအလွှာများသည်ယက်မဟုတ်သောထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးအလယ်အလတ်အလွှာကိုအရည်အဖြစ်ဖြင့်ပြုလုပ်သည်။ လွထည်; ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောထည်သို့မဟုတ် elastic band ၏မျက်နှာဖုံးသိုင်းကြိုး၊ နှာခေါင်းကလစ်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအတားအဆီးမှတဆင့်စသည်တို့ကိုရောဂါဖြစ်ပွားစေသောသေးငယ်သောဇီဝသက်ရှိများ, ခန္ဓာကိုယ်အရည်နှင့်အမှုန်ဆန့်ကျင်။
အထုပ်မှမျက်နှာဖုံးကိုထုတ်ယူပါ။ အပေါ်ဘက်နှင့်အပြင်ဘက်အလွှာများသည်ယက်မဟုတ်သောအထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလယ်အလွှာ၊ အလွှာနှင့်အပြင်ဘက်အလွှာတို့ပါ ၀ င်သည့်နှာခေါင်းကလစ်ဖြင့်အထက်ပါဝတ်ဆင်ပါ။ အလွှာကိုအရည်ပျော်သောထည်ဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည် ; ရက်ကန်းသားမဟုတ်သောထည်သို့မဟုတ် elastic band ၏မျက်နှာဖုံးသိုင်းကြိုး၊ နှာခေါင်းကလစ်ပလပ်စတစ်ပစ္စည်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။
1. မြုံထုတ်ကုန် EO အားဖြင့်ပိုးခဲ့ပြီးမြုံပေးအပ်သည်။ 2. အသုံးမပြုခင်အဓိကအထုပ်ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဓိကအထုပ်သည်ပျက်စီးခြင်းသို့မဟုတ်နိုင်ငံခြားပစ္စည်းများရှိပါက၎င်းကိုမသုံးပါနှင့်။
ရှေ့သို့ ဗဟိုသွေးပြန်ကြောပြွန် pack ကို
နောက်တစ်ခု: တစ်ခုတည်းအသုံးပြုရန်အအေး cardioplegic ဖြေရှင်းချက် perfusion ယန္တရား